घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » अहिले प्रचलनमा » कसरी कठिन ग्राहकहरु संग व्यवहार गर्ने?
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • व्यापार यात्रा • समाचार • पुनर्निर्माण • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
विश्व को धेरै मेघ गर्जन वा मौसम सम्बन्धित यात्रा ढिलाइ को सबै प्रकार को अनुभव गर्दछ। यी परिणाम क्रोधित आगन्तुकहरु र यात्रा कार्यक्रम को सबै प्रकार को पुन: काम गर्न को लागी परिणाम।
के ग्राहकहरु लाई दुखी बनाउँछ?
उत्तरी गोलार्धमा अगस्त महिनालाई प्रायः "कुकुर दिन "गर्मी को। नाम यो तथ्य बाट आएको हो कि यो प्राय कुकुर को लागी सडक मा भटकन चाहने को लागी धेरै तातो हुन्छ।
गर्मी को अन्त्य परम्परागत रूप मा पनि संसार को धेरै मा उच्च पर्यटक मौसम भएको छ। पर्यटन उद्योगले आशा गरेको छ कि गत बर्ष को प्रमुख आर्थिक गिरावट पछि कि २०२१ रिकभरी को समय हुनेछ।
यदि खोपहरु काम गर्दछन् भने २०२१ एक समय हुन सक्छ जब विमान र होटलहरु भरिएका छन्, र आगन्तुकहरु को तंत्रिका प्रायः झुण्डिएको हुन्छ। यो महिना हो जब चीजहरु, प्रायः पर्यटक पेशेवर को नियन्त्रण बाहिर, अक्सर गलत जान्छ।
अगस्त एक राम्रो महिना हो की समीक्षा गर्न को लागी हाम्रा ग्राहकहरु लाई परेशान बनाउँछ, कसरी आगो लाग्ने बाट tempers राख्न को लागी, र कसरी अक्सर अनियन्त्रित स्थितिहरु मा नियन्त्रण गर्न को लागी, जस्तै मौसम सम्बन्धी ढिलाइ को रूप मा। उच्च गियर मा पर्यटन को मौसम संग, सफलता मा कठिन परिस्थिति मोड्ने र कसरी क्रोध कम गर्न र उत्पादन र ग्राहकहरु को सन्तुष्टि बढाउन को लागी तपाइँको कौशल को परीक्षण गर्ने अवसर लिनुहोस्। तपाइँ पर्यटन मा यो कठिन अवधि बाँच्न मद्दत गर्न को लागी, निम्न मा विचार गर्नुहोस्:
याद गर्नुहोस् कि, पर्यटन को दुनिया मा, त्यहाँ सधैं संघर्ष र ग्राहक असन्तुष्टि को लागी सम्भावना छ।
जे होस् तपाइँ के गर्नुहुन्छ, त्यहाँ सधैं ती हुन् जो अधिक चाहान्छन् वा तपाइँ के के संग खुशी हुनुहुन्न। आगन्तुकहरु आफ्नो छुट्टी को लागी एक महान सौदा तिर्दै छन् र नियन्त्रण मा महसुस गर्न चाहान्छन्, पनी परिस्थितिहरुमा जहाँ कोहि पनि कुनै नियन्त्रण छैन। परिदृश्यहरु को विकास गर्नुहोस् जसमा ग्राहक लाई नियन्त्रण को केहि भावना छ केहि फरक पर्दैन कसरी थोरै। उदाहरण को लागी, यसको सट्टामा मात्र भन्न को लागी कि केहि गर्न/पूरा गर्न सकिदैन, एक संभावित विकल्प को रूप मा प्रतिक्रिया वाक्यांश को प्रयास गर्नुहोस्।
जब यी विकल्पहरु को पेशकश, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि अगाडि लाइन कर्मचारीहरु सधैं सतर्क रहन्छन् र धैर्य प्रदर्शन। अक्सर, एक पर्यटन संकट लाई सम्पूर्ण संकट को हल गरेर समाप्त गर्न सकिदैन, तर ग्राहक लाई यो महसुस गर्न को लागी कि उसले कम से कम एक सानो जीत जितेको छ।
तपाईंको कानुनी, भावनात्मक र व्यावसायिक सीमितता थाहा पाउनुहोस्।
त्यहाँ धेरै कारणहरु छन् कि मानिसहरु यात्रा, केहि खुशी को लागी, केहि व्यापार को लागी, र केहि सामाजिक स्थिति को लागी। पछिल्लो समूह मा ती को लागी, यो महत्वपूर्ण छ कि पर्यटन पेशेवरहरु "सामाजिक स्थिति" को शक्ति बुझ्छन्। यी मानिसहरु हुन् जो बहाना सुन्न चाहँदैनन्।
उनीहरु क्रोध गर्न छिटो छन् र क्षमा गर्न ढिलो छन्। उनीहरु संग व्यवहार मा, जान्नुहोस् के तपाइँ क्रोधित हुनुहुन्छ र जब तपाइँ तपाइँको सीमा सम्म पुग्नुभएको छ। चिन्ता गर्न को लागी पर्याप्त समझदार बन्नुहोस् जब समस्या पकाइरहेको छ र त्यो मद्दत को आवश्यकता पर्नेछ।
- आफैलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्।
पर्यटन एक उद्योग हो कि हाम्रो आफ्नै मूल्य को भावना लाई चुनौती दिन्छ। जनता दुबै माग र कहिलेकाहीँ अनुचित हुन सक्छ। अक्सर, घटनाहरु हुन्छन् कि मात्र हाम्रो नियन्त्रण बाहिर छन्। यो यी समयहरु को दौरान हो कि यो एक को आन्तरिक डर र भावनाहरु लाई नियन्त्रण गर्न को लागी आवश्यक छ।
यदि तपाईंको शब्दले एक विचार व्यक्त गर्दछ र तपाईंको शरीर भाषाले अर्को भन्छ, तपाईं चाँडै नै विश्वसनीयता गुमाउनुहुनेछ।
- टुरिज्मलाई बहु-आयामी विचारकहरू चाहिन्छ।
पर्यटन माग्छ कि हामी जान्दछौं कि कसरी एकै समयमा असंबंधित मागहरु र आवश्यकताहरु को एक संख्या juggle गर्न। यो जरूरी छ कि पर्यटन पेशेवरहरु लाई जानकारी हेरफेर, घटना प्रबंधन, र व्यक्तित्व मुकाबला को कला मा आफैलाई प्रशिक्षित।
कठिन अवधिको दौरान, अगाडिको लाइन मान्छे एकै समयमा सबै तीन कौशल हडताल गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ।
- सफल पर्यटन केन्द्रहरूले उनीहरूले के वाचा गर्छन्।
पर्यटन प्राय ओभर मार्केटि and्ग बाट पीडित हुन्छ र यो भन्दा धेरै वितरण गर्न को लागी आश्वासन दिन्छ। कहिल्यै एक उत्पादन कि तपाइँको समुदाय/आकर्षण प्रदान गर्दैन बेच्नुहोस्।
एक दिगो पर्यटन उत्पादन ईमानदार मार्केटि संग शुरू हुन्छ।
-सफल पर्यटन नेताहरु लाई थाहा छ जब उनीहरुको प्रवृत्ति लाई प्रश्न गर्न को लागी। प्रवृत्ति अक्सर एक प्रमुख मद्दत हुन सक्छ, विशेष गरी संकट को समयमा।
मात्र प्रवृत्ति मा निर्भर गर्दछ, तथापि, एक संकट को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ। कठिन डाटा संग सहज ज्ञान को मिश्रण। त्यसपछि एक निर्णय गर्नु अघि, एक तार्किक फैशन मा डाटा को दुवै सेट संगठित।
हाम्रो प्रवृत्ति प्रतिभा को ती दुर्लभ क्षणहरु प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, तर धेरै जसो अवस्थामा हार्ड डाटा र राम्रो अनुसन्धान मा तपाइँको निर्णयहरु को आधार को लागी प्रयोग गर्नुहोस्।
-सफल पर्यटन व्यवसायले यसलाई हावी गर्नुको सट्टा एक कठिन परिस्थितिलाई टाम लगाउने काम गर्दछ।
पर्यटन विशेषज्ञहरु लाई लामो समय सम्म थाहा भएको छ कि टकराव सामान्यतया हार-हार को स्थिति हो। वास्तविक सफलता कसरी एक टकराव बाट बच्न जान्न मा आउँछ। क्रोध को क्षण को समयमा, तपाइँको खुट्टा मा सोच्न को लागी तयार रहनुहोस्।
एक को खुट्टा मा सोच को कला सिक्न को लागी एक तरीका को लागी संघर्ष परिदृश्यहरु को विकास र उनीहरु को लागी प्रशिक्षण हो। हाम्रो पर्यटन र अगाडिको लाइनका कर्मचारीहरु जति राम्रो प्रशिक्षित छन्, उनीहरु संकट व्यवस्थापन र राम्रो निर्णय लिने बन्नेछन्।
एक सँधै परिवर्तन हुने वातावरण को संज्ञानात्मक बन्नुहोस् र जान्नुहोस् कि कसरी मुश्किल वा अस्थिर क्षणहरु बाट अवसर खोज्न को लागी।
यदि तपाइँ आफैंलाई एक टकराव मा भेट्टाउनुहुन्छ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई तपाइँको ग्राहक को अहंकार को चोट बिना संभाल। तपाइँको आक्रमणकारी लाई एक तरीकाले चुनौती दिनुहोस् कि परेशान ग्राहक लाई अनुहार नगुमाईकन उसको/उनको गल्ती हेर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
सम्झनुहोस् कि संकट एक खतरा र एक अवसर दुबै मिलेर बनेको छ। हरेक पर्यटन व्यवसाय संकट मा अवसर को खोजी।
-तपाइँको टीम को एक क्रोधित ग्राहक को हिस्सा बनाउन को लागी प्रयास गर्नुहोस्।
जब एक क्रोधित ग्राहक लाई जित्न को लागी कोशिश गरीरहनु भएको छ, राम्रो दृश्य सम्पर्क कायम राख्न को लागी र दुबै शब्दहरु मा तपाइँ सकारात्मक हुनुहुन्छ र बोली को स्वर नियोजित मा सकारात्मक हुनुहोस्।
ग्राहक पहिले भेंट गर्न दिनुहोस् र मात्र venting चरण पूरा भइसकेपछि मात्र बोल्न, ग्राहक भेंट गर्न को लागी अनुमति दिईन्छ, कुनै पनी उसको वा उनको शब्दहरु अनुचित हुन सक्छ, यो प्रदर्शन गर्न को लागी एक राम्रो तरीका हो कि तपाइँ उसलाई सम्मान गर्नुहुन्छ/यदि तपाइँ असहमत हुनुहुन्छ।
यात्रा कत्तिको खतरनाक छ? डा। पीटर Tarlow सोध्नुहोस्! सुरक्षित पर्यटन को:
डा। पीटर Tarlow को सह संस्थापक हो विश्व पर्यटन नेटवर्क, १२ as देशहरुमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र मा पर्यटन पेशेवरहरु संग सदस्य को रूप मा एक वैश्विक सदस्यता संगठन।
अधिक जानकारी र सदस्यता को लागी जानुहोस् www.wtn.travel
डा Tarlow पनि सुरक्षित पर्यटन को नेतृत्व गर्दछ, को एक सहयोगी TravelNews समूह र परामर्श फर्म। थप मा www.safertourism.com
अक्टोबर 20, 2021 मा 13: 37